Marc Ravalomanana : Vaky bantsilana ny teti-dratsiny -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Vaky bantsilana ny teti-dratsiny
Marc Ravalomanana : Vaky bantsilana ny teti-dratsiny
27/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mody manao ho “victime” sy miezaka maka ny fon’ny vahoaka na dia izy izao aza no diso. Io no tetikadin-dRavalomanana, entiny hamitahana fanintelony ny vahoaka. Vaky bantsilana io teti-dratsiny io amin’izao fotoana. “ Izaho nanara-dalàna indray ve no tadiavina samborina”, hoy izy, raha namaly ny resaka momba ny fandikan-dalàna nataony. Tsy nanara-dalàna izany mihitsy anefa Ravalomanana. Nosakanan’ny Prefe ny fangatahan-dalana nataony ho ao Mahamasina. Niteraka korontana sy savorovoro teny Analakely sy ny manodidina ihany koa izy. Izany dia mbola manamafy ny fandikan-dalàna nataony. Ny fivoizany ny hoe “ tadiaviana samborina”, dia midika fa te hanao ho “victime” izy ka , mihevitra fa amin’ny alalan’io teny io dia hangoraka azy ny vahoaka ka hitroatra hanohana azy.
Ny tetik’adin-dRavalomanana faharoa dia ny fakàna ny fon’ny “Communauté International” na ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena. Efa “liste noire” eo anatrehan’ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena mantsy izy. Efa naloany sy efa nodakain’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena ary tsy ananany fahatokisana. Izay no mahatonga an-dRavalomanana Marc manao sioka tokana miantso mpiaramiombon’antoka, kanefa tsy nisy mpihaino. Tamin’ny 2008, nitady fanazavana matotra avy tamin’ny fitondrana Ravalomanana ny solontena maharitry ny Fmi teto amintsika tamin’izany ( Pierre Van Den Boogaerd). Nampifangaroan-dRavalomanana Marc mantsy ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny volan’ny orinasany manokana. Nanjaka ny gaboraraka tamin’izany ary niseho masoandro ny halatra bevata. Avy aiza ny vola nividianana ny fiaramanidina Force One mitentina 60 tapitrisa dolara tamin’izany, hoy ny Fmi ? Tsy voavalin-dRavalomanana Marc izany ? Niharihary loatra ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fampifangaroana ny fitantanana ny firenena sy ny tombotsoany manokana.
Ny tena nahatezitra ny Mpamatsy vola iraisam-pirenena dia Ravalomanana manangon-karena ao an-damosin’ny fahantran’ny Malagasy tamin’izany fotoana. Vola tokony hanaovana tetikasa hiadiana amin’ny fahantrana mantsy nividianan-dRavalomanana fiaramanidina ho haitraitra fotsiny. Manginy fotsiny ny tsy fijeren’ity filoha teo aloha ity afa-tsy ny fampivelarana ny orinasa Tiko.
Teti-dratsin-dRavalomanana Marc mifandraika amin’izany, dia hanao izay hitarihana olona eny an-dalambe izy, hanehoana amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena fa mbola mahatarika olona. Ny olona efa naloan’ny Mpamatsy vola iraisam-pirenena toa azy ( Ravalomanana) anefa dia toy ny hazo boboka, ka na holokoina sy ravahana volamena aza ny endrika ivelany, dia boboka foana no fiantso azy ary tsy azo ianteherana. Na ny vahoaka Malagasy, na ny Fianakaviambe Iraisampirenena dia samy efa nitsipaka ambava-fo an-dRavalomanana avokoa.
Filoha Hery Rajaonarimampianina : Tsy hitsahatra raha tsy resy ny fahantrana
Nanolotra fotodrafitrasa sy fitaovana maro ho an’ny distrikan’Ambovombe, Faritra Androy, ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny faran’ny herinandro teo. Tamin’izany indrindra no nanambarany nanoloana ireo vahoaka marobe tany an-toerana fa “tsy hitsahatra izy raha tsy resy ...Tohiny
Fifidianana : Voaporofo ny hala-bato, hoy ny KMF/CNOE
Minisitry ny Tetibola vaovao : Ny fanompoana ny firenena no laharam-pahamehana